लिम्वूवान - विविध सामग्री: लिम्वुवान राज्यको विरुद्ध किरात या कुनै राज्यको जोड नगरौ
लिम्वुवान राज्यको विरुद्ध किरात या कुनै राज्यको जोड नगरौ
अहिले लिम्वुवानको विरुद्धमा किरात रार्इ यायोख्खा लगायत केहीले किरात राज्यको जोडदार वकालत गरिरहेको छन् । उनीहरुले लिम्वुवान र लिम्वुजातिको जातिय अस्तित्व तथा पहिचानमाथि धावा वोल्ने काम गरिरहेको छन् । वास्तवमा उक्त संस्थाहरुवाट शालिन समाजमा उथलपुथल गर्न खोज्नु अवश्य वुद्धिमत्ता होईन । रार्इ जातिले उनीहरुको खम्वुवान क्षेत्रलाई किरात प्रदेश हुनुपर्छ भन्नु ठिकै हो । अर्काको भूमिलाई पनि किरात प्रदेश हुनुपर्छ भन्नु न्याय संगत हुदैन । किन उसले यसो गरिरहेको छ । कुरा विचारणीय छ । यो थाहा भएकै कुरा हो कि भोलि यसले जातिय विद्वेश निम्याउछ र सानो झगडा हुदै जातिय युद्ध निम्त्याउछ । त्यसैले यायोख्खावाट लिम्वुवानलाई किरात प्रदेशमा हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा त्यागिनुपर्दछ । वरु लिम्वुवान लिम्वुवान होस् खम्वुवान खम्वुवान होस् या खम्वुहरुले चाहेको कुनै नाम होस् । त्यस्तै अन्य जातिहरुले के नाम चाहन्छन त्यो होस । अझ हामी आदिवासी जनजातिहरुले एकापसमा मिलेर कार्य गर्नुपर्दछ । तवमात्र हामी हाम्रो लक्षमा पुग्न सक्छौ । नत्र हामी कुवाको भ्यागुता जति उफ्रेपनि कुवामै झैं हुन्छौ ।
लिम्वुवानको सवालमा आवाजहरु सयौं वर्षदेखि उठीरहेको छ । वर्तमान अवस्थामा आईपुग्दा लिम्वुवानको आन्दोलनले धेरै उचाई लिईसकेको छ । यो अव निश्चित गन्तव्यमा नपुगी निभ्नेवाला छैन । यस्तो परिस्थितीमा किन लिम्वुवान होईन किरात प्रदेश भन्ने- यो सच्चा खम्वुहरुको भनाई नभई प्रतिक्रिया सामन्तीवादीहरुको खेल हो भन्ने देखिन्छ । त्यसैले यस सवालमा हामी सवै आदिवासी जनजातिहरु सचेतभएर लाग्नुपर्ने हुन्छ । यस लेखमा किरातवादीहरुलाई यो अनुरोध गरिन्छकि अहिले हामी किरात प्रदेश मात्रै हुनर्ुपर्छ भनेर वकालत नगरौं । यसले द्वेश फैलाउछ । अहिले लिम्वुवान खम्वुवान होस् फरक पर्दैन । भोलि पनि आवश्यकता परेमा हामी एक हुन सक्छौं । वृहत किरात राज्य या अरु कुनै नामको राज्य वनाउन सक्छौं । आज हामी एक भएपनि भोलि दुर्इ हुन सक्छौं । त्यसैले अहिले भएन भनेर हामीले हरेस खानुपर्ने, चिन्तागर्नु पर्ने अवस्था हुदैन । पृथ्वी गोलो छ कुनै पनि कुरा सदावहार रहीरहदैन । त्यसैले आजको दिनमा हामीलाई संघीय शासन व्यवस्था चाहिएको छ । आआफ्नो क्षेत्रमा आन्दोलन जारी छ । तसर्थ आआफ्नो आन्दोलनलाई सम्मान गर्दै एकापसमा सहयोग गरागर गरौं । यदी यसो गरिएमा हामी लक्ष्यमा चाडै पुग्छौ । नत्र हिजोको नेपालमा जसरी कुहिरोको काग भएर रहेका थियौं, राज्यसत्ताले वनाएको थिए ? त्यही रहिरहनेछौ । हामीलाई संघीयता कहिल्यै प्राप्त हुदैन । हामीले देखिरहेकाछौं कि कुनै ठूला पार्टीहरुले हाम्रो जस्तो संघीयताको अवधारणा ल्याएका छैनन् । माओवादी पनि संघीयताको सवालमा धर्मराएको छ । पून संविधान वनाउने ठाउमा उनीहरुनै छन् । यस्तो वेला हामीले नसोचे कुन वेला सोच्ने ?
नेपालको सन्दर्भमा लिम्वुवानको सवाल अन्यक्षेत्रको भन्दा फरक छ । यसमा सवैले स्पस्ट हुनुपर्दछ । यो तत्कालिन समय वि.सं.१८३१ मा गोर्खाको राजा पृथ्वीनारयणसंग सन्धी सम्झौता गरी नेपालमा सह राज्यको रुपमा मात्र प्रवेश भएको थियो । यो नेपालमा मिलेको थिएन । नेपालको मातहतमा थियो । अर्थात नेपालको उपनिवेश थियो । त्यही सेरोफेरो हुदै आजसम्म लिम्वुवान आईरहेको छ । त्यसैले लिम्वुवान यही धरातलमा उभिएर अगाडि वढ्दैछ । त्यसैले कसैकसैले भूपू राजा ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्ति जनताको नासो जनतालाई भन्ने वाक्यलाई टिपेर अव लिम्वुवान स्वतन्त्र भयो भनेर भन्ने गर्दछन् ।
लिम्वुवानको यही विषेशताको कारण लिम्वुवानको आन्दोलन शसक्त रुपमा अगाडिवढीरहेको छ । लिम्वुवानको यस्तो इतिहास तथा परिस्थितीहरु हेरेर अन्य समुदायले पनि सोच्नुपर्यो नत्र नेपाल नराम्रो तालले गृहयुद्धमा फस्नेछ । नेपाललाई गृहयुद्धमा फस्न नदिन हामी सवै सचेत भएर लाग्नुपर्दछ । लिम्वुवानवादीको चाहना पनि अखण्ड नेपाल हो । अखण्ड नेपाल भित्रको स्वायत्त राज्य हो ।
वर्तमान घडीमा संघात्मक राज्यहरुको वारेमा वहस व्यापक चलिरहेकोछ । त्यस्तै नाम र सिमानाको वारेमा पनि मतभेद भैरहेको छ । ठूला भनाउदा पार्टीहरु मतभेद वढाउन र संघात्मक राज्यको वेफाईदा देखाउन चाहिरहेका छन् । जनजाति जनजाति विचमा फुट ल्याउन कोशिस गरिरहेका छन् । यसमा जनजातिहरु कोही जानी या नजानी या पार्टीको प्यारो हुन हनुमान भक्त पनि भैरहेका छन् । त्यसको लागि जनजातिहरु सचेत भएर आफै लाग्नु पर्छ । जनजाति जनजाति विच विवाद भए जनजाति महासंघले समन्वयको भूमिका पनि निर्वाह गर्नु पर्दछ । त्यस्तै जातिय राज्यहरुको सवालमा जनजातिहरुलाई सचेत गराउनु पर्दछ । जसले जनजाति वैचारिकतालाई शसक्त वनाउनेछ । जुन सत्तिसाल झैं हुनेछ । सेवारो ।
Posted by limbu at 6:30 PM
लिम्वुवान लिम्वुवानीहरुको साझा राज्य हो
संविधानमा अनिवार्य समेट्नुपर्ने केही बुदां र छलफलक...
म र मेरो कलम
बल सभासद्को कोर्टमा
आदिवासी जनजाति पुनःसूचीकरण
भूमि-जाल र माछाको नियति
जहाँ भए पनि नेपालीका दुःख एउटै - कवि मनप्रसाद सुब्...
साउदी अरबको सामान्य चिनारी
महासन्धि नं. १६९ ले दिएको मानवअधिकार
पेरुका पूर्वराष्ट्रपति फुजिमोरीलाई २५ वर्ष जेलसजाय...
लिम्बुवान मुक्ति आन्दोलनको झलक
चियाको चुस्की र हिमाल सकिन्दैन
'राष्ट्र’हरूको निर्माणबाट राज्य विखण्डन हुँदैन
लिम्वुवान राज्यको विरुद्ध किरात या कुनै राज्यको जो...
नेपालले पाएको अग्रीम चेतावनीमा के छ ?